Gurmad iyo Gargaar ma heleen dadkii laga soo barakiciyay Laascaanood? | KEYDMEDIA ONLINE
In ka badan 3,000 oo qof oo Caruur iyo hooyiin u badan ayaa si qasab ah oo ka baxsan dhaqanka Islaamka looga soo saarey Laascaanood Todobaadkii tagey.
GAALKACYO, Soomaaliya - Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland waxaa lagu soo daadiyay kumanaan dad shacab ah oo heybsooc ay kusoo sameysay Somaliland.
Dadkan uu u badan kuwa kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya, ayaa laga soo saarey Laascaanood, iyadoo loola dhaqmay qaab aan wanaagsanayn oo ka baxsan bini'aadanimada.
Maamulka gobolka Mudug oo is-xilqaan sameeyay ayaa gurmad fiican u sameeyay ugu yaraan 3,000 oo qof kuwaasoo intooda badan lagu soo dhaweeyay magaaladda Gaalkacyo.
Gudi heer wasiiro ah oo ka socda Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay gaarey Gaalkacyo, iyagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee dadkan, iyagoo diyaarinaya qaabkii dib loogu celin lahaa degaanadoodii hore.
Hay'adda UN OCHA ayaa dhawaan sheegtay in boqolaal qof ay ku laabteen HirShabeelle, iyadoo kuwa kalena ay diyaarinayaan inay kasoo baxaan Puntland, kuwaasoo dalbadey in laga caawiyo dhanka safarka.